साहित्य- Page 60 of 61 - Online Majdoor
जनता बाँचे, भाषा बाँच्छ
एस.डी.राजचल ‘जनता म्वासा, भाषा म्वाइ’ अर्थात् ‘जनता बाँचे, भाषा बाँच्छ’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै विगत ३७ वर्षदेखि निरन्तर नेपालभाषा साहित्य तःमुंज्या वर्गीय तथा भाषिक आन्दोलनको रूपमा निरन्तरता पाउँदै आएको...
विदेशमा बस्ने नाति–नातिनाहरूलाई पत्र
प्रिय नाति अमर र नातिना अमृता धेरै धेरै सम्झना र माया ! सम्भवतः उमेरले होला आफ्ना नाति–पनातिहरूको माया र सम्झनाले आँखा रसाउँछन् । मानवीय गुण नै होला स्नेह, माया–ममता, विवेक...
सुरेश दसैंको रौनक छाएको थियो । “शिव परार साल तिमीले मलाई हराएको हैन ? हेर, यसपालि मेरो भाग्य बलियो छ । यो वर्ष मेरा धेरै काम बने । मेरा दिन फिरेका छन् ।...
सुरेश सफर अलि लामो थियो । बसको पछिल्लो सिटमा लहरै बसेका थिए तीन साथीहरू । राम, श्याम र यम । बाल्यकालका यी साथीहरू धेरैपछि भेटिएका थिए । राम थियो गाउन सिपालु । तर अलि...
सरकार, ठग र लुटेराकै मतियार !
पीसु पाठक ओरियण्टल ! तिमी, बचत र सहकारी संस्था थिएनौ होइनौ जनताको बचत ठग्ने लुट्ने तिमी, ठग र लुटेरा थियौ । ठग र लुटाहा ओरियण्टललाई कारबाही नगर्ने जनताको बचत...
सुरेन्द्रराज गोसाईँ भो मलाईमात्र बढ्ता गाली नगर्नू जात्रा मेरो नै काल बन्ला मैले कसरी बुझ्ने ? अलिकति पिउँदा देशै गुम्ने मैले कसरी जान्ने ? भो मलाई इतिहास धेरै नघोकाउनू...